चिकित्सक पेशा सुरक्षित छैन डा. भोजराज अधिकारी • Health News Nepal
चिकित्सक पेशा सुरक्षित छैन डा. भोजराज अधिकारी
चिकित्सक पेशा सुरक्षित हुनुको लागि विभिन्न कारणहरु मध्ये राज्यले चिकित्सा पेसालाई विभिन्न ऐन नियमहरु कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्नु हो। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षित ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । त्यसकारण राज्यको नीतिगत तहमा नै गलत छ।
पछिल्लो समयमा धेरै मिडिकल सुविधा लाई औल्याउँदै जादा चिकित्सकले दिने सेवा र सेवाग्राहीले पाउने सेवाहरूको बीचको बुझाइ राम्रो सँग थाहा नपाउँदा धेरै चुनौती खेप्नुपरेको देखिन्छ। चिकित्सकले कहिलेकाहीँ आफू के उपचार गर्दै छु भनेर पनि सेवाग्राहीलाई बुझाउन नसक्नु र सेवाग्राहीहरुले पनि सबै विरामीहरु निको हुन्छ भन्ने सोचका कारणले र काउन्सिलको अभावले चिकित्सक पेशा सुरक्षित हुन सकेको छैन।
त्यस्तैगरी अहिले बिस्तारै ‌इन्भेस्टकेटिभ उपचार आयो जुन प्रमाणको आधारमा औषधि उपचार आएको छ । प्राइभेट अस्पतालहरू पनि धेरै खुलेका छन् राज्यको अस्पतालमा पनि राज्यको राम्रोसँग निगरानी पुग्न सकेको छैन त्यसकारण सरकारी अस्पतालमा सेवा लिनेको सङ्ख्या धेरै बढ्ने र त्यहीअनुसार गुणस्तरीय सेवा वढाउन नसक्दा विभिन्न हाताहाति वा घटनाहरु भइरहेको हुन्छ।
प्राइभेट अस्पतालहरूमा उचित monetering नपुग्ने र अलिकति कमर्सियल भ्युबाट व्यापार व्यवसायबाट सेवा र ब्यापार दुइटा जोडिएको हुनाले खालको उपचारको क्रममा घटनाहरू हुनसक्छन् । कहिलेकाहीं घटनाहरु लाई फाइदा लिएर राज्यलाई वा अरुलाई असुरक्षित देखाउने भएको छ ‌। चिकित्सकले सेवा दिने हो त्यो नभएर रिफर गर्नुपर्ने बिरामीलाई गर्न नसकेर वा नगर्नुपर्ने बिरामीलाई रिफर गरेर यसरी विभिन्न घटनाहरू घटेको पाइएको छ।
यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि ऐन नियम कानुन र राज्यको नीति बलियो हुनुपर्छ सरकारी तथा प्राइभेट सबै संस्थाहरूको राज्य निर्देशिका र नियम परिधिभित्र चल्नुपर्दछ।
बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध एउटा शिक्षक र विद्यार्थी जस्तो हुनुपर्छ। साथी साथी जस्तो हुनुपर्छ यसमा दुई पक्ष मान्नुहुँदैन। सेवा र व्यवसाय दुवैलाई प्राइभेट अस्पतालहरुमा कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारेमा सहमति हुनु जरुरी छ। आधारभूत सेवा लिने ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा लिने अस्पताल र चिकित्सक विशेषज्ञहरूको उचित पहिचान र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
(वरिष्ठ फिजिसियन डा. अधिकारी भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)
Tags: Corona Virus #Covid19Dr.Bhojraj AdhikariNepal doctors day
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी शुरु